Guddoomiye Ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda oo Dhagax dhigay MCH ka degmada Wadajir. – Radio Daljir
Guddoomiye Ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda oo Dhagax dhigay MCH ka degmada Wadajir.
Febraayo 15, 2018 10:21 b 0
-Guddoomiye ku xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Benaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Tuulax) ayaa maanta dhagax-dhigay MCH ka degmada Wadajir, iyadoo ay ka qeyb galeen munaasabadda dhigax-dhigga maamulka iyo bulshada degmada.
MCH-kan ayaa marka uu dhamaado dhismihiisu wuxuu bixinayaa daryeelka hooyada ka hor iyo kaddib dhalmada, waxuna noqon doonaa xarun si buuxda ugu qalabeysan bukaannada haweenka ah oo ay muddo dheer baahi weyn u qabeen.
Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda maamulka Gobolka Benaadir Mudane Maxamed Tuulax ayaa sheegay in ay ka go’an tahay sii wadidda in ay ka shaqeeyaan caafimaadka dadka ku nool Caasimadda, si loo buuxiyo baahida ballaaran ee ka jirta dhinaca Caafimaadka.
“Xaruntan waxaa ay faa’iido weyn u tahay haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka ku nool degmada Wadajir , Dhibaatooyinka ka jira dalka waa ay badan yihiin, balse qaybaha dhibaatada ugu weyn soo gaartay waa caafimaadka, waxbarashada iyo nabadgelyada. Waxaan aaminsanahay in shakhsi waliba uu dowr ka qaadan karo wax ka qabashadooda”.Ayuu yiri Guddoomiye Maxamed Tuulax.
Hirgelinta isbitaalka haweenka iyo caruurta u gaarka ah ayaa ka dhigan tallaabo loo qaaday dhinaca wanaajinta caafimaadka dadka nugul oo baahi weyn u qabeen bulshada magaalada Muqdisho.